Barcelona Oo Badalka Luis Suarez Ka Heshay Isla Dalka Uruguay, Qiimayntii Ay Ragga Suuqa Barca Xidigan Ku Sameeyeen Iyo Xog Dheeraad Ah Oo La Helay. - Gool24.Net
Barcelona Oo Badalka Luis Suarez Ka Heshay Isla Dalka Uruguay, Qiimayntii Ay Ragga Suuqa Barca Xidigan Ku Sameeyeen Iyo Xog Dheeraad Ah Oo La Helay.
Kooxda Barcelona ayaa suuqa ugu jirta sidii ay ku heli lahayd badalka waqtiga dheer ee gool dhaliyaha kooxdeeda Luis Suarez kaas oo hadda ay da’diisu waynaatay. Luis Suarez laftiisa ayaa saxaafada ka hor qirtay in maamulka kooxdiisa Barcelona ay ku saxsan yihiin isla markaana ay tahay wax caqli gal ah in ay badalkiisa sii raadsadaan.
Luis Suarez ayaa bisha January noqon doona 32 sano jir waxayna maamulka kooxda Barcelona doonayaan in ay sii helaan badalka waqtiga dheer ee Suarez waxayna hadda u muuqdaan in ay isla dalka Uruguay ee uu Suarez ka soo jeedo ka heleen badalkiisa.
Ragga suuqa kala iibsiga u qaabilsan Barcelona ayaa kulankii Camp Nou fursad u helay in ay ku daawadaan isla markaana ku qiimeeyaan xidiga kooxda Celta Vigo iyo xulka qaranka Uruguay ee Maxi Gómez kaas oo ay xogo soo baxay sheegayaan in uu noqon karo badalka tooska ah ee Suarez.
Maxi Gómez oo 22 sano jir ah ayay qiimaynta Barcelona muujisay in uu yahay gool dhaliyaha ay doonayaan ee sida dhabta ah ugu badali kara Luis Suarez iyaga oo waxyaabo khaas ah oo uu astaamo u leeyahay ku soo xulanaya.
Maxi Gomez ayaa kooxdiisa Celta Vigo xili ciyaareedkan u soo dhaliyay 8 gool oo horyaalka La Liga ah wuxuuna soo sameeyay 4 gool caawin isaga oo sidaa ugu soo lug lahaa 12 gool oo La liga ah laakiin waxaa jira waxyaabo yar oo aanu wali ku qancin Barca balse uu Suarez kala mid yahay.
Il wareed laga helay Camp Nou oo qiimayn loogu sameeyay Maxi Gomez ayaa lagu yidhi: “Isagu waa ciyaartoy aad u fiican, markasta waxa uu isha ku hayaa goolka kooxda ka soo horjeeda. Isagu waxa uu yaqanaa sida qaab fiican loogu dhaqaaqo, isagu wuu deg deg badan yahay, si fiican ayuu ugu xidhmaa wuxuuna naftiisa diyaar uga dhigaa ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin isla markaana kama cabsado in uu darbeeyo”.
Dhaliisha kaliya ee loo hayo Maxi Gomez ayaa ah in aanu si fiican uga ciyaari karin garbaha weerarka balse uu inta ugu badan ku fiican yahay in uu weerarka dhexe ka ciyaaro waana arin ay inta badan iskaga mid yihiin saaxiibkiisa Uruguay ee la doonayo in uu badalo ee Luis Suarez.
Laakiin waxyaabaha kale ee uu Maxi Gomez ku soo jiitay Barcelona waxaa ka mid ah in uu awood u leeyahay in uu kubbado baas gaa-gaaban ah la ciyaari karo xidigaha kooxdiisa taas oo astaan u ah Barcelona, waxayna Barca aad u doonaysaa in Maxi Gomez uu noqdo badalka waqtiga dheer ee Suarez maadaama oo uu 22 sano jir kaliya wali yahahay oo uu wax badan horumar samayn karo.